UPolina Repik: Izindlovu zezinwele ezinde
Igama likaPolina Repik liyaziwa amantombazane amaningi kakhulu ahlola i-intanethi ngezincomo ngokudala izinwele ezimnandi zezinwele ezinde. Ezifundweni yena uhlanganyela izimfihlo zezithombe zakhe, futhi ukhuluma ngezindlela zokwenza. Lesi sihloko sisho ngoPauline njengenkosi yangempela yezinhlobonhlobo zezinwele ezimangalisayo.
Le vidiyo ithunyelwe ukusiza bonke abesifazane abafuna ukufunda ukwenza ama-stylings amahle namabhande ngokwabo. Futhi ngisho nalabo besifazane abakholelwa ukuthi abaphumelelanga, sebeqala ukuqhubeka. Lokhu kungenxa yomfundisi onobungane nomomothekayo ovela kuyi-intanethi.
Esiteshini sakhe sangasese ku-You Tube, izimfihlo zokuzenzela nezindlovu zixoxwa ngemininingwane encane kakhulu. Izincazelo zentombazane zizwakala kahle futhi ziyaqondakala. Ukuze ukwazi kahle amakhono we-brace brace, akudingeki ubhalisele ezinye izifundo. Kwanele ukuvula i-You Tube futhi uthole umsebenzisi ogama lakhe linguPolina Repik. Izitayela zezinwele, inqubo yokuzidala - lezi yizihloko zamavidiyo akhe. Kodwa manje asikho isidingo sokucela othile ukuba enze ama-spikes noma ahambe lokhu kule salon ebiza kakhulu. Kuyinto engokoqobo ukuzinakekela wena ngokwakho.
Izikhwama zaseFrance - kunzima yini?
Kwesinye se-interview uPolina uthe wayekubheka ukuthi akufanelekile ukuya salon ukuze enze izipikisi. Wafunda isiFulents weaving, ngomzamo othile. Ekuqaleni, izingalo zakhe zaqala ukhathala, kepha manje uyamangala uma ebona imisipha yazo. Ngemuva kwe-spikelets - kuyinto enhle, kodwa i-scythe yansuku zonke, hhayi into ekhethekile ngaphambi kweqembu elibizwa ngokuthi, njengoba uPolina Repik acabanga.
Izitayela zezinwele zamantombazane amaningi ekuqaleni akunikezwa: kunzima ukugcina izandla zakho ziphakanyisiwe noma amakhono emoto weminwe yakho akwanele. Ukuze wenze lokhu, kufanele nje uyeke ukucasula, futhi ubone izifundo zevidiyo i-Polina futhi usazobheka isitifiketi sakhe.
Kungakhathaliseki ukuthi kunengqondo ukufunda ukuthi ungakha kanjani izinwele ze-1-2 ngendlela efanele, bese uqala ukutadisha okulandelayo. Ngokuhamba kancane, u-weave ngamunye omusha ulula futhi ngokushesha.
Izitayela zezinwele zinikeza iseluleko senhlobo yentombazane
Esifundweni sevidiyo uPolina Repik wenza ukubeka, izitayela zezinwele zibonakala kahle kakhulu, ngoba intombazane inezinwele ezimhlophe eside . Ubuye utshele ukuthi wayesetshenziselwa ukumbumbulula nokuqinisa izinwele zakhe .
Iseluleko sikaPolina siyathakazelisa ekuseni ukubeka i-scythe ekhethekile, okumele ichitheke kusihlwa. Ama-curls aphelile ashukumisa umcabango. Futhi emva kwalokho, ungakwazi kalula ukuwabeka, ufafaze i-varnish bese uya endaweni ethile nomngane wakho othandekayo noma ukuhlangana nomngani.
U-Polina uncoma izinwele ezimnandi nezinhle zezinwele ezinde, ukuhlanganisa imisila, amabhande kanye nokukhiya okuxekethile. Unesikhathi esiningi sokwenza ngosuku futhi ukholelwa ukuthi owesifazane wesimanje kumelwe ukuthi ngandlela-thile ahlale elungile emahoreni angu-24. Owesifazane ngamunye unesimiso sakhe siqu kanye nokukhathazeka ngabanye. Isikhathi sokugqoka izinwele, esakhiwe ukukhwabanisa amahora amaningana, kusobala ukuthi asikho.
Ikhanda elihle lezinwele ezinde
Isibonelo, isikhathi sisindiswe kakhulu, impilo yezinwele igcinwa, uma wenza ubhondi ngaphambi kokulala, futhi ungasuswa ekuseni, - weluleka uPolina Repik. Izitayela zezinwele ekusebenzeni kwakhe zicatshangelwa ngemininingwane encane kakhulu. Ikakhulukazi, ama-braids angenziwa ekuqaleni kosuku, futhi avuleke kusihlwa futhi abe nama-curls amahle ukuze aye emcimbini onzima. I-Polina inikeza ikhanda elimangalisayo lezinwele ezinde, elifanele ukutadisha, emzimbeni wokuzivocavoca, emsebenzini kanye nanoma yiluphi usuku olushisayo. Ukuze wenze lokhu, udinga:
On izinwele ezimanzi, sebenzisa ukufiphaza okuncane ukulungisa.
Hlukanisa izinwele zibe izingxenye ezimbili ezilinganayo, enye yazo ehlelwe esitokisini nge-clamp.
Phakathi kokuhlukanisa kusuka ebunzini kuya ku-nape, udinga ukuthatha inombolo encane ye-strand 1, futhi eduze nomdwebo we-Face No. 2.
I-strand yesibili kufanele ihlanganiswe kuqala, idonsela efasiteleni phakathi kwabo bese ubopha ifindo.
Phinda into efanayo, kodwa njalo isikhathi esisha enombeni 2 udinga ukwengeza izinwele kusuka ku-mass mass.
Qhubeka nomjikelezo wekhanda kuze kube yilapho izinwele ziboshwe ngokuphelele kuhlangothi olulodwa lwezinwele.
Phinda konke okwesibili isigamu sezinwele.
Khona-ke ushiye izinwele ezingakwesobunxele nezinwele kufanele ziboshwe ezinsizeni ezivamile.
Kudingeka ukuthi iphakanyiswe futhi igcinwe ngabangabonakali.
Abesifazanekazi banamuhla banenhlanhla kakhulu yokuthi ulwazi oluningi lungatholakala kwi-Internet mahhala. Ngenxa yezifundo zekhwalithi ephezulu, kuhlala kuphela ukwenza umzamo wokuthuthukisa ikhono. UPolina weluleka izinwele ezimnandi zamantombazane, okuzo wonke umuntu akwazi ukufunda.
Zezinwele Mnene isikhathi eside, medium and nezinwele ezimfishane
I ukugunda izinwele ephelele round ubuso izinwele naphakathi
Scorpio owesilisa, owesifazane Taurus. bahlukene kwedivayisi
Izidakamizwa "Normase": yokusetshenziswa
UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki abakhileyo kwamanzi: ophila ekujuleni kolwandle?
Izinhlamvu zemali zethusi eRussia imperial
Rybinsk, isimo Cathedral: umlando, incazelo izici izakhiwo, ikheli